मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका २४ युवकको शव र अस्थु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्दा…… – Kavrepati
Home / समाचार / मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका २४ युवकको शव र अस्थु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्दा……
admin August 22, 2021	समाचार Leaveacomment 58 Views
सीता शर्मा, काठमाडौँ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका २४ युवकको शव र अस्थु एकैपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको छ ।
वाइडबडी विमानमार्फत मलेसियामा रोकिएका शव र अस्थु शनिबार विमानस्थल ल्याइपु¥याइएको हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले मलेसियाबाट नौवटा शव र १५ वटा अस्थु गरी २४ युवकको शव आइपुगेको जनाएको छ ।
श्रम स्वीकृति नलिई गएका, ओभरस्टे बसेका, कम्पनी छाडेर भागेका, अलेखबद्ध श्रमिक पनि मृत्यु हुने गरेको छ तर त्यस्ताको तथ्याङ्क बोर्डसँग छैन । विदेशबाट पोस्टमार्टम नगरी शव पठाउने हुनाले मृत्युबारे पहिचान नै हुने गरेको छैन ।
मृत्युका कारण थाहा नभएको, प्राकृतिक, अन्य, अनुसन्धान भइरहेकोलगायतका कारण लेखेर शव पठाउने गरिन्छ । यसबाहेक हृ’दया’घा’त, देहत्याग, सडक दुर्घटना, बिरामी, कार्यस्थल दुर्घटनाबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले ज्या’न गु’माइरहेका छन् ।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका आफ्ना नागरिकको वास्तविक पहिचान हुन नसक्नु हाम्रै राज्यको कमजोरी हो भन्नुभयो ।
‘‘पोस्टमार्टम नगरी स्वदेश पठाइने गरेकाले मृत्युको वास्तविक कारण खुल्न नसकेको भन्दै डा. गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘विदेशमा मृत्यु हुनेको शव ल्याउनुपहिले पोस्टमार्टम गर्न सकेमात्रै पनि मृत्युको वास्तविक तथ्य पत्ता लाग्छ । यसको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ तर गर्न सकेको छैन ।’’ यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
Previous कलाकार शम्भु थापाको अन्तिम बिदाईमा चल्यो रुवावासी , पशुपतिमा जे देखियो ( भिडियो हेर्नुहोस् )
Next चर्चित हास्यकलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छि धुर्बे’ लाई पुत्रलाभ, बधाई दिनेको ओइरो